Ukuphupha nge-Oma Discover Discover Discover kwi-Intanethi ▷ ➡️
Umakhulu ngumama kanina okanye utata wakhe. Iingcinga malunga nomakhulu wakho zihlala zinxulunyaniswa nemvakalelo yothando, ukuqhelana, kunye nokhuseleko. Apha, njengomntwana, wafuna ukukhuselwa kwiinkxwaleko zobomi kwaye wakhathalelwa ngovuyo kwaye waxatyiswa. Ndikunye nomakhulu wakhe, okanye nokuba ngumakhulu-makhulu wakhe, wayehlala evunyelwe ukwenza izinto ezazingavunyelwanga ngabazali bakhe. Njengabazukulwana, ootatomkhulu noomakhulu babo babaphatha gadalala, kubandakanya notatomkhulu wabo, indoda endala enobubele, kunjalo.
Ngeso sizathu sodwa, ukutyelela uMakhulu kwakuyinto ekhethekileyo. Amabali kunye neengoma zangaphambili zazisonwabisa xa sasingabantwana, nangona sasingenakucinga ezinye zezinto.
Kodwa yintoni umakhulu afuna ukusixelela yona ephupheni? Umele ntoni lo mfanekiso waphupha wexhegwazana? Ukuba kunokwenzeka, qwalasela iimeko apho wadibana khona nomakhulu ephupheni. - Okanye ngaba wawungumakhulu kunye nabazukulwana bakho kumsitho wamaphupha, nangona ungekabi mdala okwangoku?
Ngaphambi kokuba singene kutoliko jikelele, lwengqondo kunye nolwasemoyeni lwamaphupha, masiqwalasele imeko zeephupha ezichazwe linani elingaphezulu kwenani labaphuphi:
1 Uphawu lwephupha «Umakhulu» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
1.1 Amava kaMakhulu noTatomkhulu kunye kwilizwe lamaphupha
1.2 Indlu kaMakhulu idlala indima ephupheni lam, ngoba?
1.3 Ukugona umakhulu ephupheni - ukunika kunye nokwamkela uthando
1.4 Umakhulu ephupheni akaphilanga.
1.4.1 Umakhulu uyagula - ukutolikwa kwamaphupha
1.4.2 Ukhalela ntoni umakhulu? Amava abuhlungu ephupha ...
1.5 Ukufa novuko: xa kusweleke umakhulu wamaphupha kwaye ebuyela ebomini
1.5.1 Umakhulu uswelekile. Iphupha elibi!
1.5.2 Umakhulu uyaphila kwakhona, ummangaliso! Inokwenzeka kwihlabathi lamaphupha
1.6 Umakhulu ngokunxulumene nobomi obutsha ephupheni.
1.6.1 Umakhulu ukhulelwe, kulungile, into! Ukutolika ngokuchanekileyo umcimbi wephupha ongaqhelekanga.
1.6.2 Yiba ngumakhulu, iphupha elimangalisayo.
2 Uphawu lwephupha «umakhulu» - ukutolikwa ngokubanzi
3 Uphawu lwephupha «Umakhulu» - ukutolikwa kwengqondo
4 Uphawu lwephupha «Umakhulu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «Umakhulu» - awona maphupha aqhelekileyo malunga nesimboli.
Amava kaMakhulu noTatomkhulu kunye kwilizwe lamaphupha
Amaxesha amaninzi kwenzeka ukuba umakhulu notatomkhulu bavele kunye ephupheni. Ootatomkhulu batolikwa njengeempawu zobulumko kuhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha. Omnye waba bantu babini, ngamanye amaxesha bobabini, emva koko unendima yabacebisi. Imikhombandlela efihliweyo ephupheni kufuneka icaciswe ukuze uyiqonde ngokupheleleyo le ngcebiso: Ke, khumbula izijekulo, iintshukumo okanye izinto ezibanjwe ngumakhulu notatomkhulu ezandleni zomsitho wephupha. Tolika la masimboli ngoncedo lwesichazi-magama samaphupha.
Indlu kaMakhulu idlala indima ephupheni lam, ngoba?
Indlu ahlala kuyo umakhulu notatomkhulu okanye ahlala kuyo idlala indima ebalulekileyo kumaphupha amaninzi ebusuku. Eyona nto ibalulekileyo, indlu kamakhulu ibonisa iphupha lalowo uphuphayo: umntu ophuphayo ufuna indawo ekhuselekileyo apho angathatha khona umhlala-phantsi. Ubomi bemihla ngemihla kunokwenzeka ukuba buxakeke kakhulu kwaye bunoxinzelelo, ke umntu ulangazelela indawo yoxolo. Imisebenzi eluxanduva esoyikisa ukuba ingangaphezulu nayo inokubangela imifanekiso enjalo yamaphupha.
Ukugona umakhulu ephupheni - ukunika kunye nokwamkela uthando
Ukuwola kukaMakhulu kufanekisela isidingo sothando nokusondela. Nabani na othanda umakhulu wabo okanye umntu abamthandayo ngexesha lokuphila kwabo ulangazelela le mvakalelo inye ngokuchaseneyo: Ufuna ukuba omnye umntu, mhlawumbi iqabane lakho, abe neemvakalelo ezomeleleyo ngokulinganayo ngawe. Ukuba wangana nomakhulu wakho el mundo amaphupha awonwabanga, iimvakalelo zakho kulo mntu zinamandla kakhulu kunokuba ungavuma.
Umakhulu ephupheni akaphilanga.
Umakhulu uyagula - ukutolikwa kwamaphupha
Kuba umakhulu umele imvakalelo yokhuseleko, uthando kunye nokhuseleko kuhlalutyo ngokubanzi lwephupha, ngokuchanekileyo ezi mvakalelo zitshintshiwe kumakhulu ogulayo. Ngokwenyani, umntu ochaphazelekayo uziva engazithembanga. Kungenzeka ukuba umbutho usengxakini okanye umsebenzi usemngciphekweni. Iphupha licela ukuba lifune umntu omdala onamava onokunika iingcebiso.
Ukuba ubona umakhulu obuthathaka emaphupheni akho kwaye unesifo esithile engqondweni, nokuba ngumhlaza okanye nje ukubanda okulula, ngaphezu kwako konke kufuneka uzibuze ukuba sisifo esinjani eso kwaye utolike umfanekiso wephupha "ukugula kukagogo" ngokufanelekileyo. Ukukhwehlela kukamakhulu, umzekelo, kubonisa ukukhathazeka kunye nokungazithembi, kwaye ingqele inokubhengeza iingxabano kusapho.
Ukhalela ntoni umakhulu? Amava abuhlungu ephupha ...
Akusoloko kufuneka ukuba ibe ngumakhulu osokolayo xa kuvela umakhulu elila ephupheni. Umfazi osele ekhulile unokumela omnye umntu ovela kwindawo ekufutshane nephupha; Usenokuba nempikiswano enkulu nalo mntu ekugqibeleni, ekuxoxwa ngayo ngoku ulele. Umfanekiso wephupha ubuza umphuphi ukuba enze kwaye avelise ukubiza amagama.
Kwakhona, iinyembezi zikamakhulu ezililayo zinokuthetha ukuvalelisa ebuntwaneni ukuba umakhulu sele eswelekile kwaye ninobudlelwane obuhle kunye.
Ukufa novuko: xa kusweleke umakhulu wamaphupha kwaye ebuyela ebomini
Umakhulu uswelekile. Iphupha elibi!
Ukuba umakhulu usweleke ephupheni, iinkqubo zokuqonda kunye neemvakalelo zobomi. Ukuvalelisa kumakhulu ongasekhoyo kufanekisela ukulahlwa kwemigaqo yokuziphatha yakudala - umphuphi ukwimo yophuhliso olutsha! Kwangelo xesha, umntu olalayo ufumanisa ukuba isiqalo esitsha sinzima kakhulu.
Ukuba awuboni umakhulu ongaqhelekanga esifa ephupheni, kodwa ude ufumane uphawu lophupha "umakhulu wam oswelekileyo", emva koko inkqubo yokuvuthwa ngaphakathi ihamba neemvakalelo ezinzulu. Umakhulu oswelekileyo ukwamele umntu osisilumko onokuthi kwaye acebise umphuphi!
Umakhulu uyaphila kwakhona, ummangaliso! Inokwenzeka kwihlabathi lamaphupha
Ukuba umakhulu wakho sele eswelekile kwaye ngequbuliso ebuyela ebomini ebuthongweni bakhe, kuyacaca ukuba lo mntu umenze njani umphuphi. Iinkumbulo ezinzulu kakhulu zomakhulu wakho zikuvumela ukuba uphile ezingqondweni zokulala. Ukuba lo mntu kuthethwa ngaye uhamba kwinqanaba lobomi elinoxinzelelo, iphupha lokuba umakhulu aphile kwakhona libonisa isidingo esingxamisekileyo sengcebiso.
Umakhulu ngokunxulumene nobomi obutsha ephupheni.
Umakhulu ukhulelwe, kulungile, into! Ukutolika ngokuchanekileyo umcimbi wephupha ongaqhelekanga.
Iphupha likagogo onesisu ngokuqinisekileyo liyacaphukisa. Emva kwayo yonke loo nto, kunqabile ukuba abafazi abadala babe nomnye umntwana. Kodwa okuninzi kunokwenzeka ephupheni, kwaye umfanekiso wephupha ngokuqinisekileyo ulungile! Umakhulu okhulelweyo ufuzisela iingcebiso ezilungileyo neziluncedo eziza kufumana amaphupha kungekudala.
Yiba ngumakhulu, iphupha elimangalisayo.
Nokuba abo bengenabo abantwana babo kwaye ke babukele ukuba ngumakhulu kude kakhulu, banokuphupha ngequbuliso ukuba nomzukulwana omnye okanye nangaphezulu. Solo: Ithetha ukuthini imeko yamaphupha anje? Uvuyo lwabazukulwana ephupheni lunokudluliselwa kwinyani, kuba umfanekiso wephupha "ube ngumakhulu" ubonakalisa uphawu olulungileyo lwekamva. Oku kunokuchaphazela nayiphi na indawo yobomi. Ekugqibeleni uya kuthi: Bekulungile!
Uphawu lwephupha «umakhulu» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, uphawu lwephupha «umakhulu» uthathelwa ingqalelo ikakhulu enye Inani lomama itolikwe, ecebisa ngothando xa uphupha. Ufuna ukunceda umphuphi ukuba oyise ubunzima kwaye amzisele ithamsanqa kunye novuyo kubomi bexesha elizayo.
Ngexesha elifanayo, umfazi osekhulile unomsebenzi wokukhusela ebuthongweni. Ukubonakala kwayo ephupheni kufuna ukubonisa iphupha malunga neempazamo kwaye kulikhusele kububudenge obunokwenzeka.
Ngokubhekisele kuninzi lokuguga kukaninakhulu ephupheni, uyaqhubeka nokufuzisela amava obomi y bulumkokodwa negunya. Ke ngoko, uphawu lwephupha "umakhulu" kananjalo luqulathe isicelo ephupheni.
Umbono nje kamakhulu ngaphandle kokuthatha amanyathelo ephupheni ukwazisa lowo uphuphayo ukuba izicwangciso zakhe kunye nokuzonwabisa kuya kuba nempumelelo kwihlabathi elivukayo. Ukuba iphupha lilandela ingcebiso elungileyo kamakhulu wakho ephupheni, kungekudala uza koyisa yonke imiqobo ngokokuchazwa ngokubanzi kwephupha.
Ukuba iphupha lizibona linguninakhulu kusapho ephupheni, kusenokwenzeka ukuba lijikelezwe ngabantwana nabazukulwana, le meko yephupha iluphawu oluqinisekileyo, kwaye iphupha linokukhangela phambili kumaxesha aphumeleleyo.
Uphawu lwephupha «Umakhulu» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwengqondo yamaphupha kubala uphawu lwephupha "umakhulu" phakathi kweempawu zamaphupha e-archetypal. Uyaziwa njengoluhlobo Umama ongaphezulu itolikwe, enento yokwenza kuphela nentlalo-ntle yokuphupha.
Kwakhona, umhlala phantsi ubonakalisa ixesha elidlulileyo lokhuseleko kunye nephupha. Ukuphupha kudala kwavela kweli nqanaba lobomi likhuselekileyo kwaye ngoku linoxanduva lwezenzo zakho.
Kwiinguqulelo zangaphambili, ukuvalelisa kunye nokuhamba kukaninakhulu ephupheni kwatolikwa njengesilumkiso sokufa kwakhe okuzayo.
Ukutolikwa kwephupha lanamhlanje kulibona ngaphezulu Ukuphazamisa yamava obuntwana ngokulala. Ke ngoku, ukufa Iphupha likaMakhulu alinanto yakwenza nokusweleka komntu.
Endaweni yokuba umphuphi ashiye eli nqanaba lobomi bakhe ngasemva. Ubuntu bakhe ngoku bukhule kwaye bukhula bade bafikelela kwinqanaba apho anokuqhubela phambili kwindlela yobomi bakhe.
Uphawu lwephupha «Umakhulu» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya lokuchazwa kwephupha, iphupha lifumana umkhondo okanye umkhondo kumfuziselo wephupha "umakhulu." Umzi wozakuzo imikhosi yokomoya yakudala yobomi bakho bexesha elizayo.